ဘဝမှတ်တိုင်: Update Samsung Galaxy S3 To Official Android 4.2.2 Jelly Bean XXUFME3 Firmware (မြန်မာစာပါဝင်သည်)
Update Samsung Galaxy S3 To Official Android 4.2.2 Jelly Bean XXUFME3 Firmware (မြန်မာစာပါဝင်သည်)
မြန်မာစာ ပါဝင်လာတဲ့ samsung galaxy s3 official update android 4.2.2 လေးပါ။ အရင် 4.1.1 / 4.1.2 version တွေမှာ မြန်မာစာ အစင်မပြေ တာတွေ အတွက်အားလုံးအစင်ပြေသွားပါပြီ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဒီနေ့ပဲ စမ်းသပ်အောင်မြင် ထားပါတယ် ... update လုပ်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ စော်ထည့်လိုက်ရအောင်.....
ကဲစကြမယ် ပထမဦးဆုံး ဆေးလိပ်(ကြယ်နီ)တစ်လိပ်ရယ်၊ ရေဘူးတစ်ဘူးရယ်အရင်ယူးထားပါ။ဟာမွားသွားလို့ ကျွန်တော်သွားလေရာအမြဲပါတဲ့ ပစ္စည်းနှစ်မျိုးပါ...ကြုံတုံးကြွားတာ မေ့လို့ မီးခြစ်လဲပါသေးတယ်။
လုပ်နည်းလေးမစခင် ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပါရစေ လုပ်နည်းကလွယ်ပါတယ် ဒီ update လေးမှာ burmese ဆိုတဲ့ဘာသာစကားလေးပါလာပါတယ် frozenkeyboard လေးကလည်း အပြာရောင်လေးနဲ့ပါလာပါတယ် root လုပ်စရာမလိုသလို ဘာ zawgyi-one မှလည်း install လုပ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အော်တစ်ခါထဲ ကြုံတုန်း သတိပေးပါရစေ ဒီလုပ်နည်းမှာ ordin3 v3.04 လို့ပေးထားတာကို ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ တစ်ခြား ordin တွေနဲ့ သွားမလုပ်မိဖို့ သတိပေးချင်ပါတယ် သူးပေးထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲ download ဆွဲပါ။
လုပ်နေကျစရာကြီးတွေအတွက် မူရင်းလင့် လေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ လုပ်တက်ကြမှာပါ။ မသိသေးတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်.. မူရင်းလင့်က ဒီမှာပါ
၁။ဖုန်း battery ကိုအနည်းဆုံး ၈၀% ဖြည့်ပေးထားပါ။
၂။download လုပ်လို့ရလာတဲ့ zip ဖိုင်ကို PC မှာ unzip ဖြည်လိုက်ပါ။
၃။Usb debugging လုပ်ဖို့အတွက် setting/applacation/development/ Usb debugging....
၄။Usb debugging ပြီးသွားရင် ဖုန်းကို power ပိတ်လိုက်ပါ။
၅။download ဆွဲထားတဲ့ ordin ကို run လိုက်ပါ။
၆။power ပိတ်ထားတဲ့ ဖုန်းကိုvolume down+power+ home တစ်ပြိုင်ထဲနှိပ်ပါ ပြီရင် volume up ကိုထက်နှိပ်ပေးပါ။ downloading target လို့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်
၇။ပြီးရင်ဖုန်းကို usb ကြိုးနဲ့ PC မှာချိတ်ပေးပါ။
၈။ordin မှာ PDA ဆိုတဲ့ button လေးကိုရွေပေးပြီး အကွက်ထဲမှာ I9300XXUFME3_I9300OJKFME1_ILO.zip ရွေး start ကိုနှိပ်ပါ။ pass ဖြစ်သွားရင် ရပါပြီ
jelly bean 4.2.2 firmware
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/01/2013 12:02:00 am
HUAWEI Y535 လေးပွတ်လို့ မရရင်ဗို့ လေးတွေတိုင်းကြည့်ဗျ၊ touch data,touch clk, touch reset ဗို့ တွေအပြင် touch ic ကိုပေးတဲ့3v လေးပျောက်ေ...
Coolpad 7061 Myanmar Font ( No Need Root )
Coolpad 7061 အတွက် မြန်မာစာဖောင့်ပါ။ အထဲမှာပါတဲ့ bat ဖိုင်လေးကို RUN ပေးရုံပါပ...
ပုံတွေကို ပြု့ပြင်ရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့ PhotoScape 3....
Photo Studio PRO v0.9.19.2 APK(10MB)
Avast Antivirus 9-2014-Final+Serial-2095 (လိုင်စင်...
ပီမိုးနင်းရေးတဲ့ မိန်းမစိတ်ကျမ်း ကာမသိဒ္ဒိကျမ်းလိုပ...
App Protector Pro App Lock v2.26 Apk (3 MB)
About Uploading and Downloading
One Click RAM Cleaner v4.1.4
FVD Downloader v4.0.3 App
Network Connections v1.0.6
Video player ( apk)
ရပြီးမြန်မာစာမရဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက် … Another Metho...
သူ နဲ့ ကိုယ် ဘယ်လောက်ချစ်လဲ တိုင်းတာပေးမဲ့ Love Me...
“ Android ဖုန်းများအတွက် Dhammapada တရားတော် ”
Facebook Chat Box မှာ စာသားတွေကို color လေးတွေနဲ့ ...
Format Factory 3.0.1.1
samsung ဖုန်းတွေမှာ software dead ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိ...
Android ဖုန်းတွေမှာ ဖုန်းဝင်လာရင် Flash မီးလေးလင်း...
"အသံထွက်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးနိုင်မယ့် Talking Sms A...
Android ဖုန်းအတွက်﻿ "3D Live Wllpaper Applicati...
"၁၂ လ ရာသီ နှင့် ပွဲတော်များ Apk"
COPY CONTACT V4.7♥
မိမိဖုန်းထဲ zip , tar, tar.md6 ဖိုင်တွေကို flashေ...
Photoshop နဲ့ မျက်လုံးမှိတ်တဲ့ပုံလေးလုပ်ချင်ရင်
ကွန်ုပြူတာမှာ ဘာတွေအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဆိုတာ ခြေရာခံနိ...
Computer ကနေ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် ပြန်လည်မျှဝေ သုံး...
Facebook မှာ ဘယ်သူက Unfriend လုပ်သွားလည်း စစ်ပေးနိ...
CyberLink LabelPrint 2.5.3602 (Full Version) CD/DV...
Photo Studio PRO v0.9.19 Apk 9MB
မြန်မာခြင်းလုံးဂိမ်း (for android)Mr.ThanToeAung9:...
2G, 3G, Wifi, 4G ရဲ့ Internet Speed ကိုမြှင့်တင်နု...
Adobe Photoshop CS3 Portable (48MB)
အချက် ၉ ချက်နဲ့ သင့်ဖေ့ဘုတ်ကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ကြမယ...
Adobe Acrobat XI Pro ( Full Version )
Adobe Photoshop CC 14.1.2 Final RePack
Text to Speech Maker Full with Serial Key
Facebook မှာ လော့ ကျတာမှန်သမျှအကုန်ပြန်ရတဲ့နည်းလ...
Android ဖုန်းထဲမှာ wifi ရှာပေးမယ့် WiFi Finder v3....
Internet Download Manager ရဲ့ Download Speed ကိုမြ...
Bagan keyboard pro211.crack ကြိုက်တာထည်.active ဖြစ...
Minilyrics 7.6.36 For Pc (1.92 Mb)
Auto Redial / Call Timer
Virtual Button Bar
ကွန်ပျူတာအတွက် virus ကာကွယ်ရေး ashampoo anti - vir...
Voice Speed Dial
Samsungဖုန်းများအတွက်﻿ video Editor﻿လေးပါ။
Wondershare video editor full version﻿လေးပါ။ ကွန်﻿...
bass booster pro﻿လေးပါ။ bassသံ﻿လေးနဲ့သီချင်းနားေ...
မြန်မာသံစဉ် Ringtoneလေး ဆော့ဝဲလေးပါ။
ဇော်ဂျီဖောင့်လေးပါ။ Jelly bean version4.2.2အတွက် R...
CCleaner PRO မြန်မာဘာသာနဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။
လိုင်စင်မလိုတဲ့ Internet Download Manager 7.1 Beta...
Battery Saver + Optimizer Android apk များစုစည်းမှ...
Computer ကို Shutdown Time နဲ့ပိတ်ချင်သူများအတွက်
Android ဖုန်း မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း
Mozilla Firefox Browser ရဲ့ Speed ကိုမြန်အောင်ပြုလ...
Window XP,78 တင်နည်း
အသားစားတဲ့ သစ်ပင် Nepenthes attenboroughii
Facebook ကဗွီဒီယို တွေကို ဖုန်းရောကွန်ပျူတာမှာ ဒေါ...
samsung galaxy ace3ကိုမြန်မာစာပါမှန်အောင် root လ...
ဖုန်းကို အော်တို Alarm ပေးအောင်လုပ်နိူင်မယ့်Mobile...
ဒါလေးသုံးပြီး WiFi လွှင့်ကြည့်လိုက်ပါ CuteHotspot 4...
Android ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာ အမှန်မြင်ဖို့အတွက်4...
CD,DVD ခွေပေါ်မှာ ပုံရိုက်ချင်သူများအတွက် CD Label ...
System rating is not available ဖြေရှင်းနည်း
Facebook အကောင့်အလွယ်ဆုံးဖောက်နည်း ဘာဆော့ဝ်လ်မှမလိ...
Zawgyi Font Changer ( Z.F.C ) v1.0 For Android
internet Download Manager ရဲ့ Speedကိုဘယ်လိုထပ်တို...
wifi ယူပြီး wifiပြန်လွှင့်မယ် ( apk)
Mobile Alarm System For Android
Viber Lock ( for Android )
ဖုန်းနဲ့ Printer ထုတ်ကြမယ်.. PrinterShare_Mobile_P...
<<<<< မြန်မာ့ နန်းစဉ်ပတ္တမြားကြီးများ နှင့် ပတ္တမြား...
Viber ကို PC မှာ မြန်မာလိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနို...
Memory Booster (Full Version) ( for Android )
Android Tuner (စွယ်စုံရ Application)
Android ဖုန်းတွေမှာ Font Style မပါလို့ Font Change...
Uniblue Driver Scanner 2013 Final Serial Keys များ...
Windows PC များအတွက် PC Cleaner Pro 2013 ကိုဒေါင်း...
Aidfile Recovery Software Professional v3.6.3.3 (5...
Comic Life 2.2.7 for Windows 85MB
facebook ကို မိမိ နှစ်သက်သလို အရောင်လေးပြောင်းပြီး...
recovery room အကြောင်းဗဟုသုတဗျာ
ကွန်ပျူတာနှင့်ပက်သက်ပြီး လူသိနည်းသော အကြောင်းအရာမျ...